असल शिक्षणका ६ रहस्य [लक्ष्मणरेखा] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ मंसिर १६, मंगलवार १०:२३ गते
विश्वस्तरमा परिचित प्रसिद्ध नेपाली आँखा चिकित्सक डा. सन्दुक रूइतलाई ‘यस्ता अनेक बाधा, व्यवधान, असहयोग र अभावका बीचमा पनि कसरी तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुनुभयो ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘कामप्रतिको मेरो प्यासन अर्थात् रूचि र गहिरो प्रेम नै म आज सन्दुक रूइत हुनुको परिणाम हो । यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने आफूलाई रूचि लागेको काममा अनवरत लागिरहनुपर्ने हुन्छ । मानिसहरु अनेक टीकाटिप्पणी गर्न आइपुग्छन् । कतिले राम्रो गर्नुभयो भन्लान्, कतिले नराम्रो गर्नुभयो भन्लान्, तर आफ्नो अन्तरहृदयले जुन काम गर्न भनेको छ र आफूलाई विशेष रूचि छ, त्यसप्रति पागल भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ, हृदयदेखि नै समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ ।’
डा. सन्दुक रूइतको यो विचार केवल आँखाका डाक्टर वा चिकित्साको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि भनिएको विचार होइन, हामी सबैका लागि हो । हामी शिक्षक आज जुन पेसामा छौँ, त्यो पेसाप्रति नै सकारात्मक बन्न सकेका छैनौँ भने कहिल्यै पनि हामी रमाएर काम गर्न सक्दैनौँ । हामीले काम गर्न त गरौँला, तर त्यो नाममात्रको काम हुन्छ ।
शिक्षकले त्यसैले शिक्षण गर्दा हृदयदेखि नै शिक्षण गर्नुपर्दछ । एउटा असल शिक्षक आफू जहाँ, जता वा जस्तो अवस्थामा भए पनि आफूले शिक्षा दिने शिक्षार्थी देख्नासाथ उसको स्थिति वा अवस्थाप्रति कुनै न कुनै प्रकारको चासो प्रकट गरिहाल्छ । चाहे विद्यालयभित्र होस्, चाहे विद्यालयबाहिर होस्, आफूले पढाउने बालबालिकाप्रति कुनै न कुनै प्रकारको स्नेह प्रकट गरिहाल्छ ।
जब शिक्षकले हृदयदेखि नै शिक्षण गर्दछ, त्यसपछि सिक्ने बालबालिकाले पनि हृदयदेखि नै सिक्दछन्, किनकि हृदयको भाषा हृदयमा पुग्न बेर लाग्दैन । बालबालिकाका आँखा निकै तेज हुन्छन्, हाम्रो शिक्षण भित्रैदेखिको हो कि बाहिर बाहिरको मात्रै हो भन्ने कुरा तिनले सहजै आँकलन गर्न सक्दछन् । जब, तिनलाई लाग्छ कि मेरो सर अथवा मिसले मलाई हृदयदेखि नै सिकाउनुभएको छ तब उनीहरुले कहिल्यै आफ्नो सर वा मिसलाई हृदयबाट हटाउँदैनन् । आज जुनजुन शिक्षक बाबुनानीको हृदयमा बस्न सकेका छन्, ती सबैले हिजो हृदयदेखि नै बाबुनानीका लागि काम गरेका थिए ।
मह¤वपूर्ण बुँदाको पुनरावृत्ति
असल शिक्षकले आफूले शिक्षण गरेको विषयलाई विभिन्न बुँदा बनाएर विद्यार्थीलाई बुझाउँछ । जस्तैः ४५ मिनेटको कक्षामा जेजति विषयवस्तु वा पाठ्यवस्तुको शिक्षण गरियो, त्यो कुरालाई मह¤वपूर्ण बुँदाहरु बनाई अन्तिममा तिनको पुनरावृत्ति गर्ने कुरा निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकाले सबै कुरा जस्ताको तस्तै सम्झन सक्दैनन् । सजिलो गरी सम्झनका लागि बुँदाहरुले निकै सहयोग पु¥याउँछन् ।
बुँदा टिपोटको बानी स्मरण कार्यका लागि निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ । बुँदा केवल बुँदा होइन, त्यो अनुच्छेद र निबन्ध पनि हो, किनभने एउटै बुँदाभित्र धेरै अनुच्छेद र निबन्धहरु लुकेर बसेका हुन्छन् । यत्ति हो कि यो सूत्रात्मक हुन्छ । एउटा कक्षाभित्र पढाइएका पाठ्यवस्तुहरु यदि बुँदामा समेटिन सके भने त्यो राम्रो हुन्छ ।
एउटा असल शिक्षकले कक्षाबाट बाहिर निस्कनुभन्दा पहिले आफूले पढाएको विषयवस्तु बालबालिकाले बुझे÷नबुझेको कुरा थाहा पाउनका लागि पनि बुँदाटिपोट र तिनको पुनरावृत्तिले सहयोग पु¥याउँछ । यसले शिक्षकलाई ‘कक्षाबाट बाहिरिनुपूर्व मैले विद्यार्थीलाई केही दिन सफल भएँ’ भन्ने कुरालाई मूर्तरुपमा व्यक्त गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
विद्यार्थीले यदि विषयको पुनरावृत्ति गरेन भने तुरून्तै बिर्सन्छ । कक्षामा पढाइसकेपछि टिपोट गएिका बुँदाहरुलाई दोहो¥याउँदा सबै कुराहरु एकाएक साकार भएर आउँछन् र सिकाइ पनि प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ, बुँदाटिपोट र यसको पुनरावृत्तिका माध्यमले शिक्षकले शिक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
बालबालिकालाई बारम्बार गरिने प्रश्नहरु पनि निकै मह¤वपूर्ण हुन्छन्, तर ती प्रश्नहरु कति विषयवस्तुसित नजिक छन् भन्ने कुराचाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । त्यसोभए असल प्रश्न भनेको के हो त ? आउनुस्, यसको बारेमा चर्चा गरौँ । बालबालिकालाई सन्दर्भहीन, उनीहरुको मनोविज्ञानमा चोट पु¥याउने, दुःखी तुल्याउने, निरूत्साहित बनाउने र सिकाइबाट अलग बनाउने प्रकारका प्रश्नहरु राम्रा प्रश्न होइनन् । यीबाहेकका प्रश्न असल प्रश्न हुन्, अर्थात् बालबालिकाको सकारात्मक क्षमताको विकास गर्ने, विषयवस्तुको विकास गर्ने, सिकाइलाई सहज तुल्याउने, अपेक्षित उत्तर आउन सक्ने प्रश्नहरु असल प्रश्न हुन् ।
बालबालिकाभित्र अनेक प्रतिभाहरु लुकेका हुन्छन् । असल शिक्षकले ती सबै खालका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने वातावरण निर्माण गर्दछ । त्यसका लागि हामीले गर्ने असल प्रश्नहरु अर्थात् आवश्यक र प्रेरक प्रश्नहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ । नबोल्नेलाई बोल्ने बनाउने, नगाउनेलाई गाउने बनाउने, नपढ्नेलाई पढ्ने बनाउने, ननाच्नेलाई नाच्ने बनाउने खालका प्रश्न नै असल प्रश्न हुन् ।
‘तिम्रो घर र परिवारको बारेमा बताऊ, तिमीलाई के गर्न मन पर्छ ? भविष्यमा तिमी के बन्ने विचार छ ? तिमीलाई मन पर्ने कुनै एउटा गीत गाऊ’ भन्नेजस्ता प्रश्नहरुले बालबालिकाभित्रका मनोभावलाई बाहिर ल्याउन निकै सहयोग पुग्दछ ।
सूचनाभन्दा बोधमा जोड
असल शिक्षकले बालबालिकाभित्र जानकारीसँगै बोधको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । बालबालिका निश्चितरुपमा छोटाछोटा प्रश्न र खासगरी वस्तुगत विषयप्रति धेरै रूचि राख्ने खालका हुन्छन् र उनीहरुलाई सिकाइमा यस्ता सूचनामूलक र जानकारीमूलक विषयहरुले बल पनि पु¥याउँछन्, तर उनीहरु यत्तिमै मात्र सीमित हुनुहुँदैन । जे कुरा तिनले जानेका हुन्छन्, वा सूचना पाएका हुन्छन्, तिनलाई जीवन र व्यवहारमा पनि अनुवाद गर्न सके, महसुस गर्न सके भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
गौतम बुद्धको परिवार, उनको जन्मस्थान, मिति, योगदान आदि इत्यादिका बारेको तथ्य–तथ्याङ्क जानकारी भयो भने गौतम बुद्धको बारेमा मैले किन पढिरहेको छु र यसको के औचित्य छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने कुरा बोध भयो । बोध अनुभूतिजन्य हुन्छ, उद्देश्यमूलक हुन्छ र प्रेरक हुन्छ । जानकारी सतही हुन्छ, तर बोध गहिरो हुन्छ, सूचना तत्कालका लागि हुन्छ, तर बोध सधैँका लागि हुन्छ । सूचना दुःखदायी पनि हुन सक्छ, बोध सुखदायी हुन्छ । तसर्थ, एउटा शिक्षकले चिन्ता होइन, चिन्तन गर्न सिकाउँछ, सूचना मात्रैका लागि होइन, सोचाइका लागि उत्प्रेरित गर्दछ भने जानकारी मात्रै होइन, बोधका लागि पनि उत्प्रेरित गर्दछ । यो शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने अत्यन्त विशेष कुरा हो ।
बोल्नभन्दा बोलाउन खोज्नु
कुनै जमाना थियो, जतिबेला बालबालिका सुनिमात्र रहन्थे र शिक्षक लगातार बोलेर पढाइरहन्थे । अब त्यो शिक्षणविधि एकादेशको कथा भएर गएको छ । एकोहोरो कक्षामा गएर बोलिरहँदा शिक्षक त सिपालु हुन्थे, तर विद्यार्थी सधैँ कमजोर । सुन्ने कुरा नराम्रो होइन र बोल्नेभन्दा सुन्ने काम दोब्बर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सधैँ सुनेको सुन्यै मात्रै गरिरहँदा बालबालिका वाक्कदिक्क मान्छन् । त्यति मात्रै होइन, शिक्षकको शिक्षणको प्रयोजन नै रहँदैन, किनकि बालबालिकाले जति आफैँ प्रेरित भएर, आफैँले गरेर र बोलेर सिक्छन्, त्यति सुनेरै मात्रै सम्भव हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, शिक्षक सामान्यतया अन्य पेसा र व्यवसायका क्षेत्रमा लागेका मानिसका तुलनामा स्वस्थ नै हुन्छन्, तर कतिपय शिक्षकलाई घाँटीको समस्या हुन्छ । कतिपय शिक्षक अस्वाभाविकरुपमा दुब्ला हुन्छन् । यसो हुनुका धेरै कारणमध्ये मूलतः शिक्षक अधिक बोल्नु पनि हो ।
असल शिक्षक आफू कम र विद्यार्थी बढी बोलोस् भन्ने चाहन्छन् । बालबालिकालाई बोलूँबोलूँ लाग्ने वातावरण निर्माण गर्ने काम नै असल शिक्षकको हो । कसरी बोल्ने ? कति बोल्ने ? कहिले बोल्ने ? भन्नेजस्ता प्रश्नमा विचार गरेर बोल्नु त छँदै छ, तर शिक्षकले बालबालिकालाई बोल्न सधैँ प्रेरित गरिरहनुपर्दछ । उनीहरु पनि हामीजस्तै अथवा हामीभन्दा राम्रो बोल्ने भए भने त्यो हामी शिक्षकका लागि निकै गौरवको कुरा हो ।
आजका बच्चा आफैँमा निकै टाठा छन्, बिजुलीजस्ता ! यी बोल्न खोेज्छन् । अनावश्यक बोल्ने कुरा होइन, तर बोल्नुपर्ने ठाउँमा निर्धक्क उभिएर आफूले जानेको कुरा भन्नुपर्ने बेलामा नडराउने भए पनि हामी सफल भयौँ । तर, बालबालिकाले बोल्नका लागि सुन्नुपर्ने बेलामा सचेत भएर सुन्ने बानी भने कहिल्यै छोड्नुहुँदैन ।
विद्यार्थीलाई पढाउन दिनु
‘असल नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि असल नेता बनाउँछन्’ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । असल नेताको मूल पहिचान भनेकै धेरै नेता जन्माउनु हो । असल शिक्षकको खास उपलब्धि पनि आफूजस्तै योग्य बनाउन खोज्नु हो । बालबालिकाले भविष्यमा गएर म पनि सर अथवा मिसजस्तै बन्छु भन्ने सपना पनि देख्न सक्छन्, तर त्यसका लागि उनीहरुलाई प्रभाव पार्ने खालको हाम्रो शिक्षणविधि आवश्यक हुन्छ ।
बालबालिका झट्ट अगाडि गएर बोल्न, उभिन, प्रस्तुत हुन हिचकिचाउँछन् । एउटा असल शिक्षकले भने तिनको त्यो हिचकिचाहटलाई हटाएर निर्धक उभिन र बोल्न सिकाउँछन् । त्यसका लागि हामीले बालबालिकालाई आफूले जस्तै गरी कक्षामा अगाडि आएर उभिन, बोल्न र प्रस्तुत गर्न लगाइरहनुपर्दछ ।
अझ प्रभावकारी विधि भनेको शिक्षकले पालैपालो आफूले जस्तै गरी कक्षामा पालैपालो अगाडि बोलाएर बालबालिकालाई पढाउन लगाउनु पनि हो । यसले नजानिँदो गरी बालबालिकाभित्र नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न सघाउँछ । दोस्रो, बालबालिकाले आफूले विषयवस्तुलाई दोहो¥याएर जान्न पाउँछन् । तेस्रो, उनीहरुभित्रको आत्मबल बढेर जान्छ । चौँथो, विषयवस्तुप्रतिको अनुरागमा वृद्धि हुन्छ । पाँचौँ, बालबालिकाले आफ्नै साथीलाई पनि स्वीकार्ने र उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने बानीको विकास हुन्छ । यी बुँदाहरुमा ध्यान दिएर काम गरियो भने सम्भवतः असल शिक्षक बन्ने यात्रामा हामीलाई आवश्यक सफलता मिल्छ ।